faahfaahin Khasaaraha ka dhashay Weerarkii Caawa – Hornafrik Media Network
Faah faahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar caawa lagu qaaday Maqaayadaha Pizza House iyo Posh oo ku yaala nawaaxiga Isgoyska Banaadir, degmada Hodon ee magaalada Muqdisho.
Gaari uu waday ruux ismiidaamiye ah ayaa la sheegay in marka hore weerarka uu ku bilowday, waxaana dhacay qarax aad u xooggan oo inta badan Muqdisho laga maqlay.
Waxaa xigay sida la sheegay dabley hubeysan oo gudaha u galay Maqaayadda Pizza House. kadibna waxaa goobta soo gaaray Ciidamadda Gaashaan ee NISA.
Rasaas xooggan iyo qaraxyo kale ayaa laga maqlayay Gudaha Maqaayadda Pizza House. waxayna Kooxda gudaha ku jirtay Maqaayadda samaynayeen iska caabin. lkn ugu dambayn waxay ku guulaysteen Ciidanka Gaashaan inay soo afjaraan Hawlgalka, gabi ahaanba la wareegaan Dhismaha Maqaayadda.
In ka badan 15 qof ayaa ku geeriyootey weerarkaan waxaan ku dhaawacmay tiro kale, gaariga qarxay ayeey dadka inta badan ku dhinteen, shacab ayeeyna u badan yihiin.
Waddooyinka gala Maqaayadaha waxaa xiray ciidamada ammaanka maadaama howlgallo ay halkaasi ka wadaan, waxaana sidoo kale qaraxii Ismiidaaminta ahaa uu sababay in burbur soo gaaro qaar kamid ah dhismayasha ku dhow halkaasi. iyo Gaadiid fara badan oo Shacab Maqaayadaha ka afuray ay lahaayeen.
Ciidamada dowladda ayaa ku guuleystay in iyaga oo bad qaba ay soo saaraan shacab badan oo goobta ku sugnaa.
Wasiirka amniga iyo mas’uuliyiin kale oo dowladda ah ayaa gaaray halka weerarkan uu ka dhacay, welina waxay Dawladdu ku mashquulsan tahay inay xaqiijiso Khasaaraha Rasmiga ah ee goobta ka dhacay.
Weerarkan ayaa ah kii ugu horeeyay ee noociisa ah ee dhaca Bisha Barakaysan ee Ramadaam, waxayna Weerarkan oo ay sheegteen Kooxda Alshaab ay ku sheegeen inay ku laayeen Saraakiil iyo Masuuliyiin Dawladeed, laakiin Illo Madaxbanaan ayaa xaqiijinaya in Weerarka dadka ku dhintay ay u badnaayeen Shacab.